TIXRAAC:Muwaadiniinta u dhashay wadanka iyo ajaanibta dib uguso labanayo wadanka.
HALKAN KALA DAG:
- WARQADA SABABEYNEYSO BIXITANKA BANANKA. MIDKA CUSB 26.03.2020
- WARQADA SABABEYNEYSO SAFAR DIBADA AH. WARQADA
Waa kuwee shuruudaha laguso gali karo Talyaniga adigo bananka jogo.
Qawaaniinta ogol warqada banaanka aad ku tagi karto adiga oo safar dibada ah rabo, (riix halkan) waxaa kaa qadayo waardiyaha tagan halkka aad ka duuleyso. Wana qasab in aad ku buuxbuuxisa sababta iyo meesha aad u socoto,(tusale , safar caafimad, mid shaqo, ama sabba gaar ah oo cadeen leh) goobta aad dageyso 14ka maalmood ee soo socdo, telefoon nambarkaga iyo nambarka gaariga aad ku safreyso marka tagto wadanka ad u socoto si laguu helo hadii laguu bahdo. Wixi aqbaar ah waxa ka helee wepkeena.
Qofki kasoo laabta wadanka dibadiisa ma raaci karo gaadiidka bulshada,(waa inuu helaa qof kasoo doono madaarka, ama uu gaari kireesta ama uu tagsi qataa)
Qof walba oo soo gala wadanka waxa qasab ku ah in uu maro karantiilka dhuka kasoo gal ama diyaarad wa aisku mid, qofki shaqo ahaan kuso galo waxa qasab ku ah ugu yaraan 72 sacadood (lagu dari karo 48 sacadood) ila waqtiga eey u bahan kara shaqalaha ku baraya.
Qof walba oo soo galayo wadanka waaku qasab in uu soo war galiyo xarumaha caafimaadka halka ugu horeyso oo uu kasoo galayo wadnaka.
Karantiilka waxaad ku gali karta xita goob ka baxsan gurigaada , mesheey ahataba.
Qofka hadii uusan aqoon goob uu karantiilka ku galo ama(ma aqaan qof isoo doono, ma heysto hotel an aado) waxaa kugu qasab ah in aad tagto meesha eey kuu diraan shaqalaha, dhaqaalaha kugu baxana adiga ayaa iska bixinayo.
Waxa ka baxsan shuruuahan dadka ka shaqeeyo caafimaadka, shaqalaha diyaaradaha, kuwa xamuulka iyo kuwa baareyaasha caafimaad.
AMARO kaso baxo wasarada caafimaadka iyo wasarada gaadiidka.
Waxan ahay muwaadin Talyaani ah ama Qaxoti talyaaniga sharcigisa hesta, masoo gali kara wadanka?
Haa, hadi soo labashadaada eey tahay mid lagama maarmaan ah, sida in muwaadinka ama qaxootiga uuku maqna safar dibada ah tusaale(Safar dalxiis, mid ganacsi iwm)Ama muwaadinka iyo qaxootiga midku yahayba waxa qasab ku noqotay in uuka baxo wadanka uu ku nola , (Tusaale: shaqadi ayaa kaa dhamatay ama waxa ka dhacay daganaanshihi aad ku joogtay wadanka ama waxa dhameysay wax barashadi aa du joogtay).
Waxaan ahay ajnabi waxan jogaaTalyaaniga Maku laaban karaa wadankeygi?
Haa, waase hadii safarkaga uu yahay lagama maarmaan, si la mid ah qofka wadanka u dhashay ee ku sugan dibada, hadi shaqada kaa dhamaato ama waxbarashada ama sabab muhiim ah eey jirto waa safri kartaa, wixii aqbaar intaas ka badan ciwanada wasarada aimaha dibeda.
Waxaa lagu farayaa in aad iska hubiso xaalada wadanka aa du socoto sida uu u faafay fiiruska.
Waxa kale oo laguugula talinaya in aad la xiriirto sfarada wadanka ad u socoto.
Waxan kaso labanaya wadanka banankiisa, ma ii imaan kara qof iga qado goobta an kaso dago, madaarka ama xarunta tareenada?
Haa,lakiin waa qasab in aad gariga ku saarnaataan laba qof, kan wado iyo adiga, wana qasab in ad xiratan afka iyo gacmaha. Wana mid ka mid ah shruudaha lagu bixi karo, warqadana ku qor in aad guriga ku labaneysaan. Si ciidanka ku joojiyo eey u ogadaan wax walba uguna gudbiyan wasarada ku shaqada leh.
Waqada wa in eey ka buuxsanata dhaman meelaha banaan, gaar ahaan wa in aad cadeysa meesha aad u soctan iyo meesha aadka timadeen. Waxana kugu qasab ah in aad war galisa xarumaha loogu tala galay soo noqoshadada si eey ula socdaan xaalkaga labad aisbuuc ee soo socdo. Ayaga oo ogaandoona xaalkaga iyo wixi kuso kordha kana war heyn doono qatarta COVID-19